#trafficinsider Trending Posts - Neoxian City
Natural Painting I Photographed Hello. Today the weather is nice. It was nice, but the sky was overcast. The clouds are overcast but the sun is shining. So you can clearly see the white clouds moving
ကျွန်တော်နဲ့ အပင် ကုသရေး အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါ။ ဒီနေ့မှာတော့ ပိုးထိထားတဲ့ အိမ်ကအပင်တွေကို ကယ်ဆယ်ရေး လုပ်ရပါတယ်။ အိမ်က ပိန်းပန်းပင်တွေရဲ့ အရွက်အချို့ဟာ တွန့်ပြီး ကျုံလီ နေတာပါ။ အင်တာနက်မှာ ရှာကြည့်တော့…
Meeting Friends at Birthday မင်္ဂလာပါ။ တစ်နေ့က မင်္ဂလာဆောင် သွားခဲ့ပြီး နောက်ရက်မှာတော့ မွေးနေ့ပွဲ သွားခဲ့ရပါတယ်။ ပွဲတွေ ဆက်လို့သာပေါ့။ မွေးနေ့ပွဲ က တခမ်းတနားကြီး လုပ်တာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ သားသား၏ မေ
SHARE YOUR BATTLE Weekly Challenge/ Two Battles of DRAGONS Hello friends. The most common SUMMONER I use to play Splinterlands gam
Riding and Eating of Friends Happily By Car အဖော်တွေ ပျော်ပျော်ပါးပါး မော်တော်ကားနဲ့ရယ် ဆိုသလို တစ်နေ့က ကျွန်တော်တို့သည် မန္တလေးမြို့ သို့ သွားဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။ အပေါင်းအဖော်တွေကတော့ တစ်ခြံဝန်းထဲ အတူနေကြတဲ့ မိသားစု လ
Natural Senses and My Life မင်္ဂလာပါ။ Good afternoon! ဒီရက်ပိုင်းမှာ နေအတော်ပူသလို တိမ်တွေလည်း ထူနေတတ်ပါတယ်။ တိမ်တွေက ကောင်းကင် တပြင်လုံး ဖုံးအုပ်နေတာ မဟုတ်ဘဲ တိမ်အုပ်လိုက် ရွေ့လျားနေတော့ နေပူဒဏ် ခ
ခေသူလား မခေသူတွေလား။ ရေးစရာက စဉ်းစားမရတော့ တူမ၏ ကျောင်းသားများအကြောင်း ရေးရအုံးမည်။ တူမစာသင်သည့် ကိုပိုင် အထက်တန်းကျောင်းက ကလေးများအကြောင်းဖြစ်သည်။ ကလေးများ ဆိုပေသိ လူကြီးထက်ပင် လည်လည်ပတ်ပ